Inona no jerena ao amin'ny Champs Elysees any Paris | Vaovao momba ny dia
Un Ny fitsangatsanganana any Paris dia mendrika ny hijanona am-pitoniana isaky ny zorony, amin'ny maha iray amin'ireo tanàna mahaliana sy tantaram-pitiavana indrindra, toerana nitrangan'ny fisehoan-javatra ara-tantara ary mbola manintona tsy manam-paharoa ny ankehitriny. Raha hitsidika ity tanàna tantaram-pitiavana ity ianao dia tsy ho diso toerana toa ny Champs Elysees, izay lalana manankarena indrindra.
Handeha isika miresaka momba ny Champs Elysees ary izay rehetra hitantsika akaikin'ity faritra manan-danja amin'ny tanànan'i Paris ity. Na dia misy zoro maro hafa aza dia azo antoka fa ho hitanao ity toerana ity, satria io no iray amin'ireo foibe indrindra eto an-tanàna, koa aza adino izay rehetra hitanao.
1 Ny lalana Elysium Champ
3 Kianja Concorde
4 Grand Palais sy Petit Palais
5 Tetezana Alexander III
6 Museum an'i Orangerie
Ny lalana Elysium Champ
Ity làlana ity no zava-dehibe indrindra any Paris ary ny tantarany dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Làlana lehibe iray misy enim-polo metatra ny sakany ary roa kilometatra ny halavany Place de la Concorde mankany Place Charles de Gaulle aiza ny Arc de Triomphe. Tamin'ny taonjato faha-1994 dia namboarina ny firafitra ankehitriny ary tamin'ny taonjato manaraka dia namboarina tamin'ny sisin-dalana izy io. Ny iray amin'ireo fanavaozana lehibe natao dia natao tamin'ny taona 75. Raha te hahafanta-javatra dia tsy maintsy lazaina fa hatramin'ny XNUMX ny dingana farany amin'ny Tour de France dia hita eo amin'io lalana io. Tsy toerana mampifandray ny faritra manan-danja ao Paris amin'ny alàlan'ny làlana ihany io fa nanjary toerana fialamboly tena manan-danja ihany koa, miaraka amin'ireo magazay lafo vidy marika toa an'i Chanel na Christian Dior, sinema, kafe, trano fisakafoanana ary teatra.
Ity dia iray amin'ireo tsangambato solontenan'ny be indrindra eran'i Paris ary any amin'ny faran'ny Champs Elysees no misy azy. Avy amin'ity toerana ity no ahitantsika ny zotram-pitaterana mankamin'ny Paris rehetra, ka azo antoka fa ho toerana handalovanay io. ATSINANANA andohalambo manana haavon'ny dimam-polo metatra ary ny fananganana azy dia naharitra telopolo taona, tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha XIX. Eto, ohatra, dia natao ny matso miaramila an'ny Ady lehibe roa, nahatonga azy io ho toerana misy tantara. Eo amin'ny fotony no misy ny Fasan'ny Miaramila tsy fantatra, tsangambato izay may foana ny lelafo. Azo atao ny miditra ao anatiny ary mankafy ny fomba fijery avy any amin'ny faritra ambony.
Ity no faharoa kianja lehibe indrindra any Frantsa aorian'ny Quinconces any Bordeaux. Ity kianja ity dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-1792 ary nantsoina hoe Plaza Luis XV tany am-boalohany. Tamin'ny XNUMX dia nopotehina ilay sarivongan'ny mpanjaka mitaingina soavaly izay teo afovoan'ny kianja ary natao anarana hoe Plaza de la Revolución. Amin'izao fotoana izao dia hitantsika eo afovoany ny obelisk an'ny Tempolin'i Luxor any Egypt izay mihoatra ny telo arivo taona.
Grand Palais sy Petit Palais
El Grand Palais no ivon'ny Exhibition Universal an'ny taona 1900 amin'ny endrika maritrano eklektika ao amin'ny sekoly Paris. Izy io dia tranoheva lehibe misy fomba kanto izay anaovana fampirantiana sy hetsika rehetra. Manomboka amin'ny salon kanto ka hatramin'ny fampisehoana fiara na International Exhibition ny lokom-piaramanidina, salon mozika na koa ny Book Fair. Ny Petit Palais dia natsangana tamin'ny fotoana iray ihany koa ary misy ny Museum of Fine Arts ankehitriny izay tsy maintsy jerena.
Tetezana Alexander III
Este tetezana namboarina tamin'ny fomba Beaux Arts an'ny sekolin'i Paris Izy io dia iray amin'ny sary be indrindra eran'ny tanàna ary hita eo akaikin'io làlana io. Mampifandray ny Esplanade an'ny tsy mety amin'ny Grand Palais. Androany dia mariky ny maritrano Belle Epoque tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX. Tetezana iray izay hanirianay haka sary vitsivitsy izy io, satria io no sary iray azo ekena sy kanto indrindra eran'i Paris rehetra. Ny haingon-trano volamena sy ny jiro amoron-dàlana maro dia mety aminy ny mitsidika azy amin'ny alina ihany koa.
Museum an'i Orangerie
Manakaiky ny lalana no ahitantsika ity tranombakoka mahafinaritra ity izay tsy dia fantatra amin'ny anarana hoe Louvre fa azo antoka fa mendrika izany. Izy io dia miorina amin'ny tranobe tsara tarehy izay natao trano fandraisam-bahiny ho an'ny hazo volomboasary, ka izany no anarany. Afaka mahita an'ity tranombakoka ity isika sary hosodoko imasonista marobe toa an'i Monet. Ny efitrano manan-danja indrindra dia ireo izay mampiseho ireo sangan'asan'ny Monet's Water Lily. Amin'ny efitrano hafa dia ahitantsika ny sanganasan'i Picasso, Matisse na Renoir. Izy io dia heverina ho iray amin'ireo tranombakoka tsara indrindra eto an-tanàna satria, na dia kely aza izy io, dia mahafinaritra kokoa noho ny hafa izay be olona sy manana asa manan-danja ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Champs Elysées, Paris